Business Centric Network - Business Centric Network (BCN)
Business Centric Network
?‍♂️?‍♀️ Business Centric Network Company Limited (Reliable Services with Reasonable Price) မှ လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းရဲ့ အခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် အသင့်ရှိနေပါပြီရှင် ???
? ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ အသက်ဟာ ငွေကြေးဆိုရင် ရပ်တည်မှုဟာ စာရင်းအင်းပါရှင် ငွေကြေးဟာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးဖို့အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်ပြီး စာရင်းအင်းမရှိရင်ကြာကြာ ရပ်တည်လို့မရပါဘူး ဒီလိုသိနိုင်ဖို့အတွက် တိကျမှန်ကန်တဲ့ စာရင်းဇယားတွေ လိုအပ်ပါတယ် ??
? လုပ်ငန်းရှင်တွေက Audit ဆိုတဲ့ စာရင်းစစ်ဌာနတွေအသီးသီးထားရှိကြပါတယ် ??
✅ စာရင်းစစ်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးက ဌာနတိုင်းရဲ့စာရင်းတွေကို တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်စစ်ပေးရတဲ့အဖွဲ့ပါ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ ခိုင်မှာထောင့်တင်းတဲ့ဌာနတွေကို ဘက်စုံထားရှိနိုင်မှသာ ရည်ရှည်မှာ ဖြိုးဖွံ့တိုးတတ်နိုင်မှာပါရှင် ??
? လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ဒီလိုဌာနတွေ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ Business Centric Network Company Limited က ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါတယ်ရှင် ??
? Business Centric Network Company Limited ( Accounting Software and Services ) မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ လည်ပတ်စေဖို့ Accounting Software and Services များအပြင် အခြားသောဝန်ဆောင်မှု များကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ရှင် ??
? Business Centric Network Company Limited ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကတော့
? Accounting Software and Services
? MSME Books (Cloud Based Accounting Software) ? လစဉ်ကြေး 30,000 ကျပ်မှ စတင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူဦးရေအကန့်အသတ်မရှိပါဘူးရှင်
? Opening Data Entry (Software အသုံးမပြုမီ လိုအပ်သော အချက်အလက်များထည့်သွင်းပေးခြင်း) ကို ? 150,000 ကျပ်မှ စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
? Ground Stock Taking (ကုန်လက်ကျန် စစ်ဆေးပေးခြင်း) ကို ? 100,000 ကျပ်မှ စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
?လက်ကျန်စာရင်းခေါင်းစဉ်များသတ်မှတ်ပေးခြင်း နှင့် ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှု ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လည်းရယူနိုင်ပါတယ်။
? Digital Accountant
? လုပ်ငန်း၏ အဝယ်စာရင်း၊အရောင်းစာရင်းနှင့် အထွေထွေအသုံးစရိတ်များကို ပေးပို့ပါက လချုပ်၊နှစ်ချုပ်များ ကို ရေးဆွဲပေးပြီး၊ လုပ်ငန်း၏စာရင်းများကို online မှ အချိန်မရွေးကြည့်နိုင်ပါတယ် ? လစဉ် ကြေး 80,000 ကျပ်မှ စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်
? Recruitment Agency
? လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမည့် ဝန်ထမ်းများ ရှာဖွေပေးခြင်း အတွက် လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော CV များစုဆောင်းပေးပြီး၊ လူတွေ့စစ်မေးရန်လိုအပ်သော ချိန်းဆိုမှုများပြုလုပ်ပေးခြင်းကို ဝန်ဆောင်ခ အနေဖြင့် ဝန်ထမ်း လစာ ၏ 50 ရာခိုင်နှုန်းသာ ကျသင့်ပြီး၊ တစ်လအတွင်း ဝန်ထမ်းမှ မိမိသဘောဖြင့် နုတ်ထွက်ပါက CV ပြန်လည်စုဆောင်းပေးခြင်းကို တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်ရှင်
? Payroll Services
? ဝန်ထမ်းများ၏ လစာများကို တွက်ချက်ပေးခြင်း၊ ? ( 50,000 ကျပ်မှစတင်) ဝန်ထမ်းများ၏လစာ ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ပေးခြင်း(PIT)၊ လူမှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ကြေးဆောင်ပေးခြင်း(SSB) တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်ရှင်
? Company Incorporation Services
? Company Registration နှင့် ကသခ လျှောက်ထားပေးခြင်း
? Financial and Taxation Services
? ကုမ္မဏီ၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းရေးဆွဲပေးခြင်းနှင့် ဝင်ငွေခွန်ကြေညာလွှာတင်သွင်းပေးခြင်း
? 500,000 ကျပ်မှ စတင်ပြီ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ရှင်
? Business Consulting
? လုပ်ငန်းစတင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ပေးခြင်း နှင့် Business Plan ရေးဆွဲပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူနိုင်ပါတယ် ရှင်
? အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Viber : 09977160671 (or) [email protected] သို့လည်း ပေးပို့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင် ??
MSME Books တွင် Customer များထံမှ ရောင်းထားသည့် ပစ္စည်းများ ပြန်လည်လက်ခံရရှိပါက..”Credit Note” ကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည် လက်ခံနိုင်ပါသည်။ တန်ဖိုးတူ ပစ္စည်းများအား လဲလှယ်ရန်အတွက် “Credit Note” ထည့်သွင်းခြင်း “Customer” များအား ရောင်းချထားသည့် “Sales Invoice” မှ တန်ဖိုးတူပစ္စည်းများနှင့် လဲလှယ်ရန် “Sales Return” ပြန်လာပါက “Sales invoice” ကိုနှိပ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည် လက်ခံမည့် “Sales Invoice” ကိုရွေးချယ်ပါ။ “View” ကိုနှိပ်ပါ။ “Copy to” ကိုနှိပ်ပါ။ “New Credit Note” ကိုနှိပ်ပါ။ “Item” တွင် ပြန်လည်လက်ခံမည့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာ… Continue reading Sales Return @ MSMEBooks
Sales Invoices အား Base Currency ဖြင့်ကြည့်နည်း@MSME Books MSME Booksတွင် Cash Sales, Invoice Sales များကို “Sales Invoice” တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်း၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချရန်… “Sales invoices” ကိုနှိပ်ပါ။ “New Sales Invoice” ကိုနှိပ်ပါ။ “Date” တွင် ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမည့်ရက်စွဲကိုထည့်သွင်းပါ။ “Customer” တွင် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် ဝယ်သူဖောက်သည်ကိုထည့်သွင်းပါ။ “Item” တွင် ရောင်းချမည့် အမျိုးအမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ “Qty” တွင် ရောင်းချမည့် item ပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပါ။ “Unit price” တွင် ရောင်းချမည့်ကုန်ပစ္စည်း၏ကျသင့်ငွေကိုထည့်သွင်းပါ။ (ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းသွင်းစဥ်က ကျသင့်ငွေထည့်သွင်းထားခဲ့ပါက ထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။) Foreign Currency ဖြင့်ဖွင့်ထားသည့် invoice တွင် Base… Continue reading Sales Invoices အား Base Currency ဖြင့်ကြည့်နည်း@MSME Books
လုပ်ငန်းတစ်ခု အတွက် စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များထည့်သွင်းရန် အတွက် သင့်တော်သော စာရင်းခေါင်းစဉ်များကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Chart of Accounts ထည့်သွင်းရာတွင် Balance Sheet Items နှင့် Profit and Loss Items ဟု နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထည့်သွင်းရပါမည်။ Chart of Accounts များထည့်သွင်းရန်… Settings ကို နှိပ်ပါ။ Chart of Accounts ကိုနှိပ်ပါ။ Balance Sheet Balance Sheet အောက်တွင် New Group နှင့် New Account များသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ Group များထည့်သွင်းရန်..New Group ကိုနှိပ်ပါ။ ဘဏ်နှင့် ဆိုင်သော Group ကို ထည့်သွင်းလိုပါက.. Name တွင် Bank… Continue reading Chart of Account @ MSME Books
လုပ်ငန်းတွင် ကာလရှည်ကြာစွာ အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းစာရင်းများကို ထည့်သွင်းရန် Fixed Asset နှင့်သက်ဆိုင်သော Control Account များကိုဦးစွာထည့်သွင်းပေးရမည်။ Conntrol Account ထည့်သွင်းရန်အတွက်… Setting ကိုနှိပ်ပါ။ Control Accounts ကိုနှိပ်ပါ။ Fixed Asset ဘေးရှိ New Control Account ကိုနှိပ်ပါ။ “Name” တွင် ထည့်သွင်းလိုသော Asset Name ကိုထည့်သွင်းပါ။ “Code ” တွင် ထားရှိလိုသော Code Number ကိုထည့်သွင်းပါ။ “Group” တွင် Asset Group ကိုရွေးချယ်ပါ။ Create ကိုနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသော Fixed Asset Control Account ကိုတွေ့ရမည်။ Fixed Assets များအတွက်… Continue reading Fixed Assets @ MSME Books
Our Team U Wai Minn Aung (Technical Director) Daw San Thida Myo Latt (Business Development Director) Daw May Min Aung (Enterprise Service Director) Daw Than Than Yee (Executive Officer) Our Partners Quick & Tech Software Centre Tech Horizon IT Solution Castle Myanmar Noble IT Solutions Co., Ltd AKKM Training Center Xpendo Computer and Business Training… Continue reading About
Office 1015 Yathawaddy 14th Street Block 13, South Okkalapa Township Yangon, Myanmar. (+95)9977 160 671 ~5[email protected]esscentricnetwork.com